Iitrikhi zoMsitho eziPhambili siSigqeba ngasinye kufuneka silandelele | Martech Zone
Umthengisi onamava uyaziqonda izibonelelo ezivela kwimisitho. Ngokukodwa, kwisithuba se-B2B, Iziganeko zivelisa ukukhokelela ngakumbi kunamanye amanyathelo okuthengisa. Ngelishwa, uninzi lwezinto ezikhokelayo aluguquki luthengise, lushiye umceli mngeni kubathengisi ekufumaneni ezinye ii-KPIs ezongezelelweyo ukubonisa ubungqina bexabiso lotyalo-mali kwiminyhadala ezayo.
Endaweni yokugxila ngokupheleleyo kwizikhokelo, abathengisi kufuneka baqwalasele iimetrikhi ezichaza ukuba isiganeko samkelwe njani ngabathengi abanokubakho, abathengi abakhoyo, abahlalutyi kunye nokunye. Kubaphathi, ukukwazi ukuqonda indlela yokuphucula amava omnyhadala unokunceda ukuqhuba iziphumo ezingcono kwikamva.
Ukutyhila ezi methrikhi kulula ukutsho kunokuba kwenziwe. Ukunceda amaqela entengiso akhusele uhlahlo-lwabiwo mali lomsitho wexesha elizayo, ndaqulunqa iimetrikhi ezintathu ezinokuthi zenziwe ngabathengisi ngeeCMO zabo.
Ngelixa iinombolo zentengiso kunye nezikhokelo ezintsha ziya kuhlala ziyinto ephambili kwii-CMOs, zisakhathalele ezinye iimetrikhi ezinje ngokuqondwa kwegama. Ngexesha lomsitho, qiniseka ukuba uqaphele ezinye iimetrikhi ezinje ngokundwendwela iwebhusayithi, inani lodliwanondlebe olucwangcisiweyo kunye nemithombo yeendaba zentlalo. Ukuze ubone iimpembelelo zezi metriki, jonga isabelo selizwi laphambi nasemva komsitho ukuze ubone ukuba ubukwazile na ukukhuphisana nabo ukhuphisana nabo ngelixa ubuzimase umsitho. Okokugqibela, iminyhadala ingasetyenziselwa ukuqokelela umbono weqela lesithathu. Cinga ukusingatha uphando ngexesha lomsitho ukubonisa iziphumo malunga nokuqaqanjiswa kwegama ngokubanzi okanye ukwamkelwa ukuze wabelane ngeCMO yakho.
Isixa seeNtlanganiso eziCwangcisiweyo
Yonke imihla, sonke sineentlanganiso ngefowuni. Nangona kunjalo, ukuthatha ixesha lokuba nentlanganiso ubuso ngobuso kubalulekile ukuze uvale isivumelwano. Chitha ixesha ulinganisa inani leentlanganiso zobuso ngobuso ngexesha lomnyhadala wakho kwaye uthelekise elo nani ngokuchasene neetriki zilandelayo:
Ukugcinwa kwabathengiUkufumana abathengi abatsha kubalulekile, kodwa ukugcina abathengi bakho bangadlala indima ebalulekileyo ekugcineni i-churn yakho kwaye yonyusa ingeniso. Iintlanganiso ezingaphakathi kwabantu zinokunceda ukomeleza obu budlelwane kunye nokuqalisa iincoko ezifunekayo.
Khulisa ishishini: Ngabathengi abaninzi abahamba rhoqo neziganeko ezifanayo nezakho, yenza inqaku lokusebenzisa eli thuba ukwakha ubudlelwane kunye nokukhulisa ishishini kwiiakhawunti ezikhoyo.
Iidili zivaliwe: Ngaba unayo imitha yokubonisa ukuba zingaphi iintlanganiso ubuso ngobuso ezikhokelele kwizivumelwano ezivaliweyo? Yintoni enye edlale indima ekuvalweni kwesivumelwano? I-SME okanye isigqeba esithile? Ngokufumana olu lwazi ungacwangcisa ngcono imicimbi ezayo.
Ukulungelelaniswa phakathi kwentengiso kunye nentengiso kudlala indima ebalulekileyo ekuqhubeni ukuqhuba, ukuvala izivumelwano kwaye ekugqibeleni, kunyusa ingeniso. Iziganeko zinika ukuthengisa kunye namaqela entengiso ivenkile yokumisa enye ukuba nefuthe kumgca wenkampani. Ukubonisa oku kwi-CMO, qiniseka ukulinganisa ezi metric zijolise kwingeniso:
Inani leeDemos: Ewe iinkampani ziya kukhusela isikhokelo kwimisitho, kodwa ngaba ezo zikhokelo zihlala zilungile? Endaweni yokulandela umkhondo wenani lezikhokelo kwimisitho, landela inani leedemo ezigqityiweyo. Oku kunganika amaqela ukuqonda okucacileyo ukuba ngabaphi abathengi abanomdla abanomdla wokwenene kwimveliso kwaye banokugcina ixesha lamaqela athengisayo. Ukongeza, le metric inokubonisa iiCMOs indima edlalwe ngumsitho ekunikezeleni idemo.
Ukusebenza kwintlanganiso: Ukulandelela inani leentlanganiso ezicwangcisiweyo eziguqulweyo kumathuba kunokubonisa ukuba ngawaphi na abameli bokuthengisa abasebenza ngokukuko ekuqhubeni izivumelwano phambili. Le metric ayibalulekanga kwi-CMO yakho kuphela, kodwa nakwiNtloko yeNtengiso ukuze bafumane ukuqonda okungcono kwamandla ommeli ngamnye. Olu lwazi lunokunceda abathengisi babekwe bhetele kulo lonke uhambo lwabathengi kunye nokubonelela ngengqondo yokuba ngubani omele aye kwiminyhadala ezayo.
Ubungakanani boBungakanani boBungakanani: Impumelelo evela kwiminyhadala ayisoloko ilinganiswa ngenani leedili ezivaliweyo. Endaweni yokugxila kuyo yonke ingqalelo yakho kwizivumelwano ezikhulu ezinamazinga empumelelo asezantsi kwaye uthathe ixesha elide ukuvala, gcina iso kubungakanani besivumelwano ukuze uncede amanqaku ethembele kumthengi olungileyo kwicala elifanelekileyo.
Zonke izigqeba ziqhutywa ziziphumo. Ukuchitha ixesha ngaphambi, ngexesha, nasemva kweziganeko zokuhlalutya oko kusebenzileyo kunye nento enokuphucula iya kunika abathengisi, abacwangcisi bemisitho kunye nabaphathi ukuqonda okungcono koluphi utshintsho ekufuneka lwenziwe ukuqinisekisa ukuba imicimbi yexesha elizayo iyaphumelela. Ngokufezekisa indlela eqhutywa ziimetriki, abathengisi baya kuba nexesha elilula lokuthethelela utyalo-mali kwiminyhadala, beshiya iqela lobunkokheli kungekho ndlela yimbi ngaphandle kokunyusa ulwabiwo-mali lweziganeko ezizayo.
tags: b2bukuqondwa kwegamaintengiso yenkomfaukufunyanwa kwabathengiukugcinwa kwabathengiamadili avaliweukuthengisa umcimbiIiNkomfa zeNtengisoukusebenza kwentlanganisoiintlanganiso zentengisoIintlanganiso ezicwangcisekileyo
Iindawo zokuThengisa zenza ukuba iiNtengiso ze-Intanethi ze-Intanethi zikhuseleke